को हुन् नेपालकी एकमात्र महिला उद्धार पाइलट ?? – साँचो खबर
को हुन् नेपालकी एकमात्र महिला उद्धार पाइलट ??
हाम्रो देश नेपालमा महिलाहरुले घरको मात्र काम गर्नु पर्दछ बाहिरको काम त केबल पुरुषको लागि मात्र हो भनेर केही कतै सोच्ने गरिन्छ । तर महिलाहरुले पनि मौका पाए भने पुरुषहरुले जस्ते साहासिक काम गर्न सक्छन भन्ने उदाहरण कतिपय महिलाहरु बनिसकेका छन । राम्रो नाम काम दाम पनि कमाईरहेका छन । मात्र उनीहरुलाई परिवार सबैले साथ अनि माया दिनु पर्दछ । आज हामी त्यस्तै एक जना साहासिक महिलाको बारेमा चर्चा गर्ने गईरहेका छौं ।
३१ वर्षकी प्रिया अधिकारी नेपालकी एकमात्र महिला उद्धार पाइलट हुन् । प्रिया सगरमाथाको उचाइभन्दा माथिको उचाइमा हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउँछिन् र त्यहाँ पुगेका सहयोगीलाई सहयोग पनि गर्छिन् । प्रिया डाक्टर बन्न चाहन्थिन् तर एउटा भेटले उनलाई पाइलट प्रेरित गर्यो । उद्धार पाइलटको जुन जिम्मेवारी छोडेर आधा दर्जन युवतीहरु भाग्छन् उनले अहिले त्यही करिअर रोजेकी छिन् ।
प्रिया अधिकारी हाइस्कुलको पढाइपछि मेडिकल कक्षामा भर्ना हुनको लागि भारत पुगेकी थिईन । त्यतिबेला भर्नाको प्रक्रिया चलिरहको थियो तर घरबाट फोन आयो । भर्नाको प्रक्रिया चलिरहेको थियो तर घरबाट फोन आयो कि आमाको स्वास्थ्य खराब रहेको छ । त्यपछि उनी फर्कनु पर्यो । आमालाई सन्चो भएपछि मैले काठमाडौंमै बुद्ध एयरलाइन्समा क्याबिन क्रुको जागिर गर्न थालें । त्यही क्रममा बीएस्सी गरे अनि एमबीए पनि । एक दिन कसैले मेरो दाइलाई आफ्नो साथीसँग भेटाए । उनी हेलिकप्टर पाइलट थिए । उनले मलाई साथमा उडानमा लैजान चाहे म तयार भएँ । यो मेरो पहिलो हेलिकप्टर उडान थियो । घर आएर मैले आमासँग भनें बरु म ऋण लिन्छु तर पाइलट नै बन्छु । पहिलो उडानको ४ महिनापछि नै मैले हेलिकप्टर उडाउँदैछु ।
एक्ली महिला जंगल पहाडमाथि कसरी उड्न सक्नुहुन्छ कसैले केही भनेनन् भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए म महिला हुँ त्यसैले मैले यो काम गर्न सक्दिन भन्ने सोचाइ मेरो दिमागमा कहिल्यै आएन । हो आफ्नो सुरक्षाको लागि मैले बक्सिङ सिक्न सुरु गरें । ५ वर्षदेखि जहिले पनि काठमाडौंमा हुन्छु बिहान एक डेढ घण्टा बक्सिङ अभ्यास गर्छु । दैनिक योग पनि गर्छु । मेरो खल्तीमा सधैं एउटा चक्कु हुन्छ । यद्यपि यसको अहिलेसम्म जरुरत भने परेको छैन । मेरो एउटै सिद्धान्त के भने नशामा भएको यात्रुलाई हेलिकप्टर चढ्न दिन्न ।
सगरमाथाकी एक्ली उद्धार पाइलटले संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखरलाई कसरी हेर्छिन् त भन्ने प्रश्नमा प्रिया अधिकारी भन्छिन सगरमाथामा जानु बच्चाको खेल होइन । तर म कैयौं पटक यता आरोहीसँग भेट्छु जो केही सोचविचारै नगरी यहाँ आउँछन् । म आफैं कहिल्यै सगरमाथा आरोहण गर्न चाहन्न । तर मलाई खुसी छ कि जहाँ सबै चढ्ने चाहन्छन् म त्यहाँ सिधै ल्याण्ड गर्छु ।
Previous: फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो शव्द हुन्छ : हेल्लो यसको चलन कसरी चल्यो
Next: देशभरका उखु किसानले चिनी उद्योगहरूबाट लिनुपर्ने करिब ९० करोड उठाउन निर्णायक आन्दोलनको घोषणा